Iimaski kunye neengxube ezisekelwe kwiiyo zeenwele
Izinwele, ezinjengesikhumba, zinokuma, zininzi okanye ziqhelekile. Ukuba unezinwele eziqhelekileyo, ngoko akudingeki ukuba zinyamekele, zibukeka zilungile kwaye azibangeli naziphi na iingxaki. Kodwa iinwele ezinqabileyo nezomileyo zizisa iingxaki ezithile, iinwele ezinjalo zidinga ukunakekelwa okhethekileyo, kuyimfuneko ukuba senze rhoqo iimaski kwaye uhlanjululwe ngamabhanki akhethekileyo kunye neengxube. I-tea iya kusinceda apha.
I-tincture ye-green tea yeenwele ezinamafutha
Spoon amaqabunga etizi ngamanzi abilayo (1 inkomishi), emva kwemizuzu emihlanu umxube kwaye uthele i juice yelisi ye-lemon kunye ne-3 ml cognac. Lo mxube kufuneka uthululwe kwi-750 ml yamanzi afudumele. Emva kokuhlamba, le ntshukumo kufuneka ihlanjwe ngeenwele. Emva kweveki ezi-2, phawula ukuba iinwele zagqitywa kwaye zafumana ukukhanya okunempilo.
Nantsi ingqungquthela efanelwe iibrunettes kunye nabasetyhini abanabomvu. I-spoonful yetiyi emnyama iyafana ne-bark ye-oki ithululela ngamanzi abilayo (iikomityu ezimbili), ugxininise imizuzu elinesibini, uxinzelele kwaye uthule ilitha lamanzi. Emva kokuhlamba nge-infusion enjalo, hhambisa iinwele zakho. Amanzi akufanele ahlambuluke.
IMascara yeenwele ezinemibala
Wonke umntu uyazi ukuba emva kokutshintsha kweekhemikhali zokudaya, iinwele ziba buthathaka, ngoko kufuneka zidlule ngokukhethekileyo. I-mask yohlaza oluhlaza, i-sage, i-mint, i-plantain ne-oregano iya kukunceda. Kufuneka uthathe iipuni ezimbini zeeti uze uthule enye i-spoonful yonke imifuno ngamanzi abilayo (1 litre) imizuzu elishumi elinesihlanu. Emva koko, cwina, pholisa kwaye ungeze kwi-infusion 400 g ye-pulp yeesonka zesonka. Gcoba kakuhle uze uhlabe kwiingcambu zokuhlamba nganye. Gubungela intloko yakho nge polyethylene kunye nethawula, gcina imaski malunga neyure.
Ubunzima beenwele ezimanzi
Ukuze ukwazi ukulwa nemida yokuhlukana, thatha i-spoonful ye-St John John's flower wort, njenge-clover kunye ne-3 spoonfuls of nettles fill 100 ml of oil tree. Gcina, kufuphi kwaye kwindawo emnyama iintsuku ezilishumi. Ngaphambi kokusetyenziswa, gxininisa kwaye uhlabe izimpande 3 iiyure ngaphambi kokuhlamba iintsuku ezi-4.
I-Rinser ukukhusela ukulahleka kweenwele
Isetyenziselwa ukuthintela ukulahleka kweetrakthi kunye neyeza zabo. Spoon amaqabunga e-birch kunye nee-2 zeengqayi zamagqabi atyunyiwe e-burdock uthele i-1 litre yamanzi ashushu, upheke imizuzu eyi-10 phezu kobushushu obuphantsi. Ngokwahlukileyo, velisa 1 i-spoonful yetiyi eluhlaza kwiiglasi ezimbini zamanzi uze ugxininise imizuzu emi-5-7. Yenza zombini umhluzi uze uthele kwisitya esinye. Gcoba nge-infusion yentloko emva kokuhlamba, uze ugobe intloko ngetawula ngemizuzu engama-20. Yiba nombindi. Yenza inkqubo nganye iintsuku ezintathu kwiiveki ezimbini, thabatha ikhefu 1 ngeveki uze uphinde uphinde.
Ukunyuka kweenwele kwiMaski
Enye i-spoonful yamagqabi e-rosemary kunye netiyi ezimnyama ezininzi zityhala amanzi abilayo (iikomityi ezimbili). Ukunika imizuzu elineshumi, uxinzelelo kunye nosuku zonke ugibe kwiingcambu zeenwele ezimbini.
Ukugcinwa kweenwele kunye neengxube zeeti ezimnyama
Ukuze unike iinwele umthunzi omnyama, khanyisa kwaye upende nge teyi yezinwele ezimnyama kuza kukunceda. I-Henna ibhekisela kwidayi yangokwemvelo, kwaye xa ungeze itiye kuyo, unokufumana ifoni ebomvu xa udweba. Nangona ungenayo i-henna, ungadlala iincwele zakho ngaphandle kwayo.
Imibala oyithengayo kwiivenkile inokutshabalalisa isakhiwo seenwele, ngoko iqala ukubuthathaka kwaye iphume. Nazi iindlela ezimbalwa zokupheka ongeke uzidayise nje iinwele zakho, kodwa zinike amandla.
Iipuni ezimbini ze-tea emnyama kufuneka zithelelwe ngamanzi abilayo (iikomityi ezi-2) kwaye upheke imizuzu engama-20 phezu komlilo omncinci. Emva koko, kufuneka utyunye kwaye usebenzise umhluzi ofudumeleyo wokuhlambulula iinwele. Gquba iinwele nge-polyethylene kunye nethawula. Emva kwemizuzu engamashumi amabini, vula uze udibanise iinwele zakho. Ukuba ufuna umbala ukuba uzalise ngakumbi, gcina ukufakelwa kweenwele zakho ngomzuzu. Emva kwenkqubo, musa ukuhlamba iinwele.
Ngamanzi abilayo (2 iikomityi) uthele iipuni ezi-3 zamagqabi omnto owomileyo kunye neepunipoyi ezi-2 zetiyi ezimnyama, zimbindize imizuzu engamashumi amabini, uze uvumele ukuphumla imizuzu eyi-15 kwaye unokucoca. Faka isicelo kwizinwele ezicocekileyo, gxuma intloko kunye ne-polyethylene kunye nethawula, emva kwesigama seyure, ususe kwaye udibanise iinwele.
Ukuze ufumane umthunzi obhebileyo wobhedu, kufuneka uthathe i-200 g ye-onion peel uze upheke iwayini elimhlophe yamagilebhisi (iikomityi ezimbini) kwimitha engamashumi amabini. Ipholile, uxinzelelo kwaye usebenzise kwizinwele.
2 iispuni zeeyi kufuneka zithelelwe ngamanzi abilayo (1 iglasi). Dvustakan iwayini ebomvu ukutshisa kwaye ufake i-100 g ye-ashberry yamnyama. Ubilise phezu komlilo kunye ne-tea emnyama. Emva kwemizuzu elishumi elinesihlanu ukucima isitofu, pholisa umhluzi uze uyisebenzise ukucocekisa iinwele. Gcina intloko efudumele, kwaye emva kwemizuzu engamashumi amane, hlamba ngamanzi afudumele.
Umaski wokubhena iinwele ezimvu
Ngaloo maski unemibala ebomvu ukuze uqinise izinwele.
Iipuni ezimbini zamateyi omnyama uthele amanzi abilayo (iikomityi ezi-2), vumela imizuzu engu-7 igxininise. Emva koko, shaya i-yolk nge-spoonful ice cream kunye ne-oyile yeoli yeoli. Hlanganisa yonke into kunye nomhluzi weeyi uze uwutshise kwindawo yokuhlamba amanzi ngamaminithi alishumi. Ngeenwele ezicocekileyo, sebenzisa umxube ofudumele kunye nopende nge-polyethylene, emva kweeyure ezingama-3 uhlambe ngamanzi afudumeleyo.
Emva kokuhlamba zonke, susela iinwele nge-chamomile okanye itiye.
Ukuphumla kweeyile ukulungisa iinwele
Ukunyuswa kweeyile kusetyenziswa ukulungisa umtsalane. I-spoonful yetiyi emnyama kufuneka ithululelwe ngamanzi abilayo (1 iglasi), ichithwe imizuzu engama-7, uze udibanise kwaye ungeze isiqingatha se-spoonful ishukela. Ngaphambi kokuba inxeba ilinxeke kwi-curlers kufuneka udibanise i-curl nganye kunye nokukhushulwa. Izinwele zomile, i-curlers zisuswe kwaye iinwele ziza kuhlala zide nje ngokusebenzisa i-foam, i-varnishes, i-mousses ne-gels.
Iimaski zokuphela kweenwele ekhaya
Imaski yeenwele kunye nebhiya
I-Technique yomsila wehashe ukusuka kwizinwele
Indlela yokukrazula iinwele ezinde
Indlela yokubetha iinwele ekhaya
I-Keratin Hair Mask: I-Most Effective Homemade Recipes
Iimvumi zikaVladimir Putin zathandeka uTimati
Sitshintsha ubomi bakho nge Feng Shui
Ukupaka ngeipulo kunye neepum
Amakhukhi e-Walnut «Amanqanaba okuphakama»
Ukunceda umntwana wakho nge colic kunye nokucima
Iidlela zokufumana i-saladi kunye neekroti eKorea
I-Pasta ene-zucchini, i-anyanisi kunye nesipinashi
Ienkolelo zaseRashiya zizisa inhlanhla kunye nokuhluleka
Indlela yokuhlangabezana noMnyaka omtsha ngaphandle kokunciphisa umzimba
Iicakecakes kunye neidiya
Indlela yokwenza ibhokisi enesimo senhliziyo ngezandla zakho: iklasi yokunyathela ngesinyathelo kunye nesithombe